विचार | साझामन्च
अब कसले–कहिले हेर्ला १७ वर्षे जेलबन्दीहरुलाई ?
राजनीतिमा जीवन समर्पण गर्दा पनि योगदानको कदर नभएकोमा ठूलो दुर्गा अधिकारीको प्रश्नै प्रश्न !
राजनीतिमा सच्चा योगदान पुर्याउने नेता–कार्यकर्ताको इतिहासलाई यहाँ दन्ते कथा बनाउन खोजिँदैछ । त्यो पनि ‘एकादेशको कथा’ जस्तै । राजनीतिक उपलब्धी हासिल गराउन ज्यान आहुती दिने महान शहीद, चरम अभावमा हुर्किएका उनका परिवार, जेल जीवन भोगेका, लामो समय प्रवासमा जीवन व्यतित गर्न बाध्य सच्चा देशभक्त नेता कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरिँदैछ । ......»विस्तृतमा
रोजा इस्लाम धर्मावलम्बीको पाँच आधार स्तम्भहरूमध्येको एक हो । अरबी पात्रोको नवौं महिना रमजानमा विश्वभरका मुस्लिमहरू एकैसाथ रोजा (उपवास) बस्दछन् । यस महिनामा मुस्लिम समुदायका महिलापुरुष दुवै एक महिनै रोजा अर्थात व्रत बस्छन् । एक महिने व्रतलाई मुस्लिम समुदायले धार्मिक उत्सव मान्छन् ।संसारका सबै मुस्लिम समुदायको लागि यो एक महिनाको निकै ......»विस्तृतमा
नेपाल र नेपालीको समृद्धिको चर्चा नगरी सायद कुनै नेताको भाषण पूरा हुँदैन । कुनै कार्यक्रममा बोल्दा होस् वा कार्यक्रम बनाउँदा समृद्धि शब्द जोडिएकै हुनुपर्छ भन्ने भान पर्न गएको छ । किनकि देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकले अब समृद्धिको यात्रा शुरु गरेको छ र यसलाई पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्नुभएको छ । कतिपयलाई लाग्न सक्छ, देशमा ......»विस्तृतमा
यात्रा कसलाई मात्र रमाइलो नहोला र ? हाम्रो पनि त्यस्तै रह्यो । फागुन २५ गते धुलैधुलोको पाउडरले एक आपसमा नचिनिने भएका हामी रात्रीको रमाइलो बास बस्न पाउँदा राहतको श्वास फेर्न पाएका थियौं । झमक्क साँझ पर्दा बसन्तपुरका पाहुना भएर हामी ताप्लेजुङ होटलमा टुप्लुक्क बास माग्न पुग्यौं । हामी सबै त्यहाँ नअटाउने भएपछि अर्को बासको खोजी गर्दा अलिपर ......»विस्तृतमा
कुनै कम्पनीको व्यवसाय ओरालो लाग्यो भने सबैभन्दा पहिला त्यसको कार्यकारी प्रमुख (चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर, सिइओ) असफल भएको मानिन्छ । त्यसैगरी कम्पनी फस्टाउँदै गयो भने त्यसको जस पनि कार्यकारी प्रमुख अर्थात् सिइओले नै पाउँछ । यसलाई सरल र सबैले सहजै बुझ्ने अथवा हाम्रो सापेक्षतामा चलन चल्तीको भाषामा ‘मेनेजर’ वा व्यवस्थापक जे भने पनि हुन्छ । ......»विस्तृतमा
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री–राज्यमन्त्रीहरु सबैले नियुक्ति सँगसँगै भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने बाचा जप्न थालेर त्यसलाई अटुट निरन्तरता दिइराखेका छन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरु चाहिँ तदर्थ स्थितिमै चलिरहेका छन् । तिनलाई पूर्णता दिनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अत्यावश्यक छ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई ......»विस्तृतमा
हाम्रा धेरै सदस्य गाउँमा बस्ने किसान छन् । किसानलाई सदस्य बनाएर व्यवसायिक एवम् स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्न चाहन्यौं । त्यसका लागि संस्थालाई एउटा शसक्त माध्यमको जरुरी थियो । हामीले निर्णय गर्यौं डेरी उद्योग एकदमै उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । त्यसैले हामीले डेरी उद्योगमा जोखिम मोलेर हाम फाल्यौं । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ......»विस्तृतमा
नेपालका सबै तहका सरकारको अहिले मुख्य चासो बनेको छ– विकास र समृद्धि जनचाहनालाई कसरी पुरा गर्ने ? केन्द्र सरकारले देश बनाउने, प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो तहलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने हुटहुटी स्वभाविक हो । निर्वाचित सरकारहरु विगतमा जस्तो भ्रष्ट हुनबाट जोगिए भने देशले चाडै काँचुली फेर्ने आशा ......»विस्तृतमा
विकेन्द्रीकरण शब्द केन्द्र आधार पदमा ‘ई’ र करण प्रत्यय लागेर ‘वि’ उपसर्ग समेत थपिएर कुनै खास केन्द्रमा मात्र नभएर छरिएका केन्द्र अर्थ लाग्ने शब्द हो । विषय वा प्रसङ्गले अर्कोे अर्थ नलागेमा न्याय, व्यवथापन र कार्य सम्पादनलाई राजधानी वा एकै ठाउँमा मात्र सिमीत नराखी विभिन्न प्रदेश र स्थानीय निकायहरुकाट शुलभ तरिकाबाट जनसेवा गर्नु ......»विस्तृतमा
यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको बिषय सर्वाधिक चर्चाको बिषय बनेको छ । यो एकताको बारेमा आफूलाई बिद्धान भन्ने लेखक, बिश्लेषक र अन्य बिभिन्न व्यक्तिका विचार प्रवाह भइरहेका छन् । त्यसैगरि माओवादी केन्द्र भित्र बिद्रोहीको रुपमा देखिएका गोपाल किराँती लगायतका विचार पनि नेपाली आइरहेका छन् । यी दुवै पार्टीमा आस्था राख्ने र भिन्न ......»विस्तृतमा